Urur goboleedka IGAD iyo sanduuqa hormarinta ee UNCDF oo kala saxiixday Heshiis 2 sana ah
HomeWararka SomaliyaUrur goboleedka IGAD iyo sanduuqa hormarinta ee UNCDF oo kala saxiixday Heshiis 2 sana ah
Urur goboleedka IGAD iyo sanduuqa hormarinta caasimada ee UNCDF ayaa maanta oo isniin ah shaaciyay inay galeen heshiis labo sano ah oo lagu taageerayo iswaafajinta siyaasada xawaaladaha ee guud ahaan wadamada IGAD.
Iyadoo si dhow loola shaqeynayo wadamada xubnaha ka ah IGAD ee Jabuuti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan iyo Uganda, iyo khubaro farsamo oo ka socota Xoghaynta IGAD, UNCDF ayaa khariidayn doonta dhamaan siyaasadaha iyo xeerarka khuseeya wadan kasta oo ka tirsan IGAD. Kooxda ayaa markaa kadib falanqeyn doonta iyaga si ay u arkaan tilmaamo is burinaya ama aan iswaafaqsaneyn, waxay soo jeedinayaan meelaha mudnaanta la siinayo iswaafajinta, waxayna soo jeedin doonaan talaabooyin wax ku ool ah oo lagu fulinayo, ayay ku sheegeen IGAD iyo UNCDF warsaxaafadeed wadajir ah.
“Dadaalladan dhammaantood waxaa ugu dambeyntii loogu talagalay in lagu sii hayo xawaaladaha ku sii qulqulaya gobolkan oo ay muhiimadda weyn u leeyihiin, iyo in badan oo ka mid ah laga beddelo shabakadaha aan rasmiga ahayn ee aan sharciyeysnayn loona beddelo marinno ammaan ah, nidaamsan, oo hufan,” ayay tiri.
Iyadoo la waafajinayo siyaasadaha iyo qaabdhismeedka sharciyeynta ee xawilaya xawaaladaha, hindisaha IGAD / UNCDF wuxuu raadin doonaa dhisida hay’ad cilmi baaris adag, oo leh xog ku saabsan keenista iyo baahida adeegyada xawaaladaha. Furaha dadaallada ayaa sidoo kale noqon doona fahamka sida xawaaladaha, haddii looga beddelo lacag caddaan ah loo maro kanaallada dijitaalka ah, ay u noqon karto irridda muhaajiriinta iyo qoysaskooda ay u soo maraan alaabada kale ee maaliyadeed ee qiimaha lagu kordhiyay ee dhisi kara adkeysigooda iyo caafimaadkoodaba, ayaa lagu yiri war-saxaafadeed .
Dhamaadkaas, IGAD iyo UNCDF waxay sidoo kale fududeyn doonaan isdhaafsiga barashada asaaga ah ee daneeyayaasha muhiimka ah oo ay ka mid yihiin xoghaynta IGAD, bangiyada dhexe iyo maamulada kale ee ay khuseyso oo ay weheliyaan shirkadaha bixiya adeegyada xawaaladaha iyo kuwa kale ee ganacsiga gaarka loo leeyahay si dhammaan daneeyayaasha ay u bartaan gacanta midba midka kale caqabadaha, mudnaanta, yoolalka, iyo dhiirigelinta, ayuu yidhi.
Dowladda Kenya oo war ka soo saartay Ganacsade Soomaaliyeed oo dalkeeda Lagu dilay
Shirka Afisyooni inta uu socday maxaa diirada Lagu saaray ?